Mareykanka oo yareeyey duqeymihii Somalia + Sababta - Caasimada Online
Home Warar Mareykanka oo yareeyey duqeymihii Somalia + Sababta
Muqdisho (Caasimada Online) – Weerarada duqeymaha ee Mareykanka uu ka geysan jiray dalalka Soomaaliya, Suuriya, Afghanistan, Ciraaq iyo Yemen ayaa si weyn hoos ugu dhacay sanadkii ugu horeeyay ee madaxweyne Biden.
Warbixin ay soo saartay hay’adda lagu magacaabo Airwars ayaa lagu sheegay in 54% ay hoos u dhaceen duqeymaha Mareykanka uu ka fulin jiaray dalalkaas, marka loo eego sanadkii 2020-ka.
Madaxweyne Joe Biden ayaa isbeddel ballaaran ku sameeyay weerarada cirka ee uu Mareykanka kula dagaalamayo kooxaha xagjiriinta, kadib markii hay’addaha u doodda xuquuqda Aadanaha ay walaac ka muujiyeen khasaaraha dadka rayidka ah.
Waxaa la rumeysan yahay in duqeymaha Mareykanka ay kaalin muhiim ah ka ciyaari jireen beegsiga argagixisada iyo la dagaalanka ay kula jiraan dowladaha ay ku gacan siin jireen weerarada cirka.
Soomaaliya waxaa ugu dambeysay duqeyn uu Mareykanka ka geysto bishii August ee sannadkii hore, waxayna ahayd markii uu duqeeyay saldhig kooxda Al-Shabaab ku lahaayen tuulada Camaara ee koonfurta Mudug.
Duqeyntii u dambeysay ee Mareykanka ayaa ku soo aaday xilli ay deegaankaas ka wadeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Galmudug guluf ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, oo dagaal adag kula jirta.
Si kastaba, duqeymaha uu Mareykanka sanadkii dhamaaday ee 2021 ka fuliyay dalalkaas ayaa noqonaysa tiradii ugu hooseysay ee duqeymaha Mareykanka tan iyo sannadkii 2004.